Pizza Hut Myanmar | Pabedan | Yangon | yathar
Address No. 03-063/064, Level 3, Junction City, Bo Gyoke Rd, ရနျကုနျ, Pabedan, Yangon
Genre Pasta , Pizza , Italian
No. 03-063/064, Level 3, Junction City, Bo Gyoke Rd, ရနျကုနျ, Pabedan, Yangon
2018.08.13 Dinner 2,500-5,000 4
ကိုယ်တွေလို pizza ချစ်သူတွေအတွက်တော့ pizza hut လေးကကိုယ့်အသည်းစွဲပါပဲ။Pizza ဆိုင်တွေအများကြီးရှိနေပေမယ့် pizza hut က pizza လေးတွေကတခြားဆိုင်တွေကနဲ့မတူ တစ်မျိုးထူးခြားပြီးကို စားလို့ကောင်းနေတာပါ။ကိုယ်တွေအစားအများဆုံးဖြစ်တဲ့ BBQ Chicken လေးဆိုရင်လည်းတကယ့်ကို BBQ party ကြီးတစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်လို့ခံစားသွားရလောက်အောင်မွှေးကြိုင်အရသာရှိလွန်းပါတယ်။Spaghetti တွေဆိုရင်လည်း European ဆိုင်ကြီးတွေကအရသာအတိုင်းအမိုက်စားတွေချည်းပါ။ဒီကြားထဲကြက်တောင်ပံလေးတွေကလည်းကိုယ့်အသည်းနှလုံးကိုလှုပ်ခတ်အောင်စွဲဆောင်နိုင်ပြန်တော့မစားရမနေနိုင်ဖြစ်ရပြန်ပြီပေါ့။ဈေးနှုန်းလေးတွေကလည်းသင့်တင့်ပြီး promotion လေးတွေခဏခဏလုပ်ပေးတာကိုလည်းတကယ်ကိုအားရကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။